Kukoshesa Zuva Rokufambisa Raja Ne SandPebblesMazuva
Odisha - The Eastern state yeIndia, nguva dzose inorarama maererano netsika dzekare dzekare uye tsika, uye inowanzozivikanwa kwose kwose pasi rose nekuda kwechimiro chayo uye kugadzirisa mhemberero dzemunharaunda. Zvisinei, nguva yakanakisisa yekushanyira hurumende ndiyo iyo yakakurumbira Raja Festival inotanga. Inguva iyo tsika netsika yezvimbo iyo inogona kuonekwa pane zvakanakisisa.
"Raja Parba" kana "Raja" - Ndizvo zvakafanana nekunzwika. Imhemberero yakakurumbira yemasikati matatu yakatarwa muOudisha mukati meJune. Vanhu vanotenda kuti mai vamwarikadzi vepasi vanoenda kumwedzi mumazuva okutanga e3 emutambo, asi zuva repiri rinoratidza kutanga kwemwedzi wezuva Mithuna. Ndiyo apo nguva yekunaya inopinda.
Kubva pane kupindira uye nziyo kune zvokudya, kunakidzwa, uye nezvimwe, chiitiko chekufembera chinopa hutano husina kunaka hwekare uye hutsva, huchiita kuti tive nezvinhu zvekuita. Zvechokwadi, iyo inofadza yezororo inotorwa kune rimwe danho.
Munguva iyi mutambo we3-zuva, vakadzi vanozorora kubva pamabasa avo epamba uye vanofarira mamwe mimwe mitambo yekunze nekunze. Vasikana vanoda kukoshesa nguva idzi nekupfeka chimwe chinhu chitsva kubva mumafashoni emangwana kana kupisa tsika dzeSarees neAgatha mutsoka dzavo, uye hakuna munhu anofamba asina shangu panyika.
Kuita Inonyanya Mukana Uyu
Zvakanaka, pamusoro pezvose, usapotsa mukana wekuenda kune Odisha munguva Raja Mutambo neSand Pebbles Kuratidzwa N Nhanyo! Ikokupiko pamusoro pekeke, Sand Pebbles Tour N Mafambiro anopa kusvika ku10% rubatsiro kuitira kuti iwe uve nekunzwa kwemhemberero chaiyo. Zvine zvinodarika mazita e60 emhando yepamusoro yezvose zvinogadzirwa, tinoita kuti uende kune dzimwe nzvimbo dzehurumende kuti ugare nemhemberero nevanodiwa vako mumavara ayo echokwadi. Uye, hapana munhu anokwanisa kufanana nekuchengetedzwa nekunyaradzwa kwekirasi yedu. Ikoshesa nguva iyo uchidamba, kuimba, uye kutamba mitambo yemadzitateguru mune chero chikamu cheOdhiisha uye tinoita kuti zviitiko zviitike kwauri nemafambisirwo edu emafambiro ekufambisa.
Tishanyirei chero nguva pane + 91-993.702.7574 kana kushanyira sandpebblestours.com/raja-utsav-odisha. Bhuku rako rekufamba ikozvino uye uende rwendo rwekufambisa, uchitarisa matanho ose anozivikanwa muhurumende.